Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 167841 times)
« Reply #80 on: April 12, 2011, 08:17:09 AM »
Quote from: Redirector on April 11, 2011, 02:06:55 PM
မှန်ပါလေစွ ... မှန်လေစွ ...
ကိုRedirector ရဲ့ အဖြေကမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
ဒီလို ဥာဏ်ရွှင်တော့ ဘ၀မှာ
ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ .....
« Reply #81 on: April 12, 2011, 08:24:27 AM »
Quote from: nature on April 11, 2011, 08:33:43 PM
´´ကိုကိုမောင်မောင်အန်ကယ်ရေ . ချော်ကီလေးအတွက် ပန်းသီး နှစ်လုံးယူခဲ့ပေးပါ ... မြန်မြန်လေးနော် ´´ ...
ကဲ . သင့်ကောင်မလေးအတွက် ပန်းသီးနှစ်လုံးကို ဒီတံတားပေါ်ကဖြတ်ပြီး ဘယ်လိုသယ်ယူမလဲ ...
ကိုnature ရေ -
ဒီheartကိုလည်း ကြိုက်မယ်လို့ထင်ကြောင်းပါ ...
ဒီကိစ်စနဲ့ပတ်သက်လို့ . သင့်ချော်ကီပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ် ...
ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ အဖြေကို မှန်တယ်လို့ ပေးမရသလို
မှားတယ်လို့လည်း ပြောလို့မဖြစ်လေတော့ -
သင့်မဒီကိုပဲ အဖြေကိုမေးကြည့်လေလော ...
ကိုnature ရဲ့ မဒီ(များ)နဲ့ အဆင်ပြေပါစေလို့ .....
« Reply #82 on: April 12, 2011, 08:29:57 AM »
Quote from: maryar on April 12, 2011, 12:11:39 AM
´´ချော်ကီ´´ ဆိုတာကတော့ -
´´အချစ်ကလေး´´ ဖြစ်ပါကြောင်း ...
« Reply #83 on: April 12, 2011, 08:38:27 AM »
ခုတ်လို့မပြတ် . ထောင်းလို့မကြေ .
« Last Edit: April 12, 2011, 08:58:36 AM by zero0 »
« Reply #84 on: April 12, 2011, 09:21:45 AM »
ရေ water (ပါနီ)
« Reply #85 on: April 12, 2011, 09:30:43 AM »
ပေါင်မုန့်၁၀ ချပ်ကြားကိုဝက်ပေါင်ခြောက် ၃ ခုညှပ်ထည့် ပေရမှာပါ
ဒါပေမယ့်၃ ချပ်ကြားဆို ၃ ချပ်ကြား ၂ ချပ်ကြားဆို ၂ ချပ်ကြားအညီအမျှညှပ်ထည့်ပေးရမှာပါ
« Reply #86 on: April 12, 2011, 09:36:56 AM »
အတောင်နဲ့ ပျံ ခေါင်းနဲ့ နား တဲ့ 
« Reply #87 on: April 12, 2011, 10:03:55 AM »
ခွေးထီးလေးကောင် နဲ့ ခွေးမတစ်ကောင်
ကူးတို့ လည်းမရှိဘူးကူးစရာအကူပစ္စည်းဆိုလို့ ဘာမှမရှိဘူး
ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးထီးတွေရဲ့ ဖွားဖက်တော်တွေရေမစိုဘဲနဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းရောက်အောင်ဘယ်လိုးမလဲဆိုတာဖြေပေးကြပါဦးခင်ဗျာ
thoe saung :
« Reply #88 on: April 12, 2011, 10:13:06 AM »
သူငယ်ချင်းတို့ ရေဒါလေးကိုဖြေပေးကျပါအုံး.........................အက္ခရာ ရှစ်..ရှစ်လုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲ
« Reply #89 on: April 12, 2011, 11:05:18 AM »
Quote from: thoesaung@gmail.com on April 12, 2011, 10:03:55 AM
အဖြေရဲ့ သော့ချက်က နောက်ဆုံးခွေးက ခွေးမပါ။ ပစ္စည်းတွေကို ငုံခိုင်းထားတာလေ။